Ukuphupha iDiamond Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Needayimane sidibanisa ukuxabiseka, ixabiso elihlala lihleli kunye nobuhle. Umtshato wedayimane ubhiyozelwa emva kweminyaka engama-60 yomtshato, uphawu lokuhlala kunye nokungonakali kothando. Iidayimani zinzima kakhulu kwaye zihlala ixesha elide.
Akugqitywanga, nangona kunjalo, amatye anqabileyo awaziwa kwaphela. Ke ngoko, umntu oneempawu ezingabonakaliyo ekuboneni kuqala uhlala ethelekiswa nedayimani erhabaxa. Nangona kunjalo, ngokusikwa okuqaqambileyo, iidayimani zikophula ukukhanya kumacandelo azo kwaye zenze ubuqaqawuli obukhethekileyo. Ubucwebe bedayimane, ngakumbi obuqaqambileyo, buxabisekile kwaye bufunwa emva kwayo yonke el mundo.
Idayimani yavela njengekhabhoni ecwebezelisiweyo kwizigidi zeminyaka eyadlulayo nzulu phantsi komhlaba. AmaIndiya asebenzisa iidayimani njengezitelezi kwangoko kwinkulungwane yesine ye-BC, njengoko babebanga impembelelo yomlingo kubo. AmaRoma ayewaxabisa amatye njengezixhobo. Kwangexesha elide babonwa njengabangenalo ixabiso kunamatye anqabileyo enemibala. Oko kutshintshe kuphela kuhlelo lwangoku.
Nabani na ophupha iidayimane mhlawumbi uyazibuza ukuba yintoni enexabiso ngakumbi kubo. Mhlawumbi umphuphi ubona izinto ezixabisekileyo ebomini bakhe, ngokucacileyo nangokucacileyo ephupheni, kodwa mhlawumbi akakaqapheli ubuncwane bakhe. Xa utolika amaphupha, kubalulekile ukuba unikele ingqalelo kubume besimboli yephupha: ingaba idayimane isikiwe okanye iluhlaza, icacile okanye inamafu?
1 Uphawu lwephupha «idayimane» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «idayimane» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «idayimane» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «idayimane» - ukutolikwa ngokubanzi
Ekuchazeni amaphupha, idayimane, njengelitye eliyigugu, luphawu lobutyebi kunye nobutyebi. Ubume bakhe obomelele kakhulu bumenza uphawu lokuzingisa kunye nobunyulu, kodwa kunye nomfanekiso we-archetypal wobume obunzima kunye nokubawa kwabantu.
Uphawu lwephupha lunokuqhubekeka lube sisiqwenga sezacholo kwinqanaba elithile. mampunge bonisa ukuphupha. Kwangokunjalo, idayimane ekuchazeni iphupha inokuqondwa njengesicelo sokubonisa ukungafezeki kwakho kunye nokuzixhasa. Iphupha linokuphakamisa umbuzo wokuba ingaba ukuphupha kubomi bokwenene kungaphandle ngokwaneleyo na. ubunzima y Ukucaca isampulu.
Ukuba uphawu lwephupha yidayimane esikiweyo, iphupha lithembisa ngokuqaqamba kwaye ikamva elingenaxhala. Inani elikhulu lamatye axabisekileyo athembisa ukwamkelwa kwizangqa eziphezulu. Idayimane njengesipho ibonisa ubuhlobo kunye nokunyaniseka ekuchazeni amaphupha.
Ukuba iphupha limalunga nedayimani engapholiswanga, kukho umngcipheko wokunqongophala kwemali, iphupha elo kufuneka lilumke kwaye libe noqoqosho ngeendleko.
Uphawu lwephupha «idayimane» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, idayimane imele ukungaguquguquki ekuchazeni amaphupha. Undoqo ophakathi yokuphupha: ukwazi ngohlobo olunyulu, umphefumlo oxabisekileyo ongafiyo. Njengophawu lwephupha, idayimane ikwabonisa ubunye bengqondo kunye ne-subconscious.
Ubuncwane obucocekileyo nobucocekileyo bufuzisela ephupheni isimo sengqondo esingenakugungqiswa kunye neengcinga ezilungileyo zeli phupha kuluntu olujolise kulungelelwaniso.
Isimboli yephupha iboniswa njengedayimane kwindawo erhabaxa. iimpawu ezintle amaphupha afana nokuzithemba, ukuzilawula, kunye nokulawula iimvakalelo zakho.
Ukuphulukana nedayimane ephupheni kunokubonisa ukulahleka kwento ebalulekileyo ephupheni. Iinkalo ezininzi zamatye aqingqiweyo zinokucacisa isidingo ekuchazeni iphupha, a Ingxaki yobudlelwane Ingathathelwa ingqalelo phantsi kwemiba eyahlukeneyo.
Uphawu lwephupha «idayimane» - ukutolika kokomoya
Ekuchazeni amaphupha, idayimani elixabisekileyo lithetha amanzi acocekileyo kunye nomhlaba ocociweyo. Njengophawu lwephupha eligqithisileyo, inesipho esinexabiso okwakhiwa kwaye ityhila umlinganiso wexabiso ovuka ngalo ukuphupha ebomini bakho bokomoya.